Wararka - Reagent-ka cusbooneysiinta nukliyeerka cusub ee leysiifiyey ayaa lagu qaadi karaa heerkulka qolka, wuxuuna u adkeysan karaa 47 temperature heerkulka sare. Laguma xadidin silsilad qabow!
Reagent-ka cusbooneysiinta cusbada Nucleic acid ee leysiifiyey ayaa lagu qaadi karaa heerkulka qolka, wuxuuna u adkeysan karaa 47 temperature heerkulka sare. Laguma xadidin silsilad qabow!
Baahida faafitaanka guud ee caalamiga ah ee loogu talagalay baaritaanka nukleerka asalka ah ee dibada
Marka loo eego tirakoobka WHO, laga bilaabo 4-ta galabnimo ee Sebtember 16, 2020, waqtiga Beijing, tirada kiisaska la xaqiijiyay ee COVID-19 adduunka oo dhan waxay dhaafeen 29.44 milyan in ka badan 930,000na way dhinteen.
Isagoo wajahaya faafida daran ee dibada, baahida loo qabo COVID-19 reagent ogaanshaha nucleic acid waa mid aad u weyn. Shirkadaha Shiinaha reagent reagent waxay leeyihiin khibrad caafimaad oo taajir ah oo ku saabsan dalabyada wax soo saarka, isla mar ahaantaana, waxay sidoo kale leeyihiin faa'iido weyn oo xagga kharashka ah, iyagoo siinaya fursad weyn oo suuq caalami ah. Si kastaba ha noqotee, hannaanka dhoofinta xirmooyinka dibedda ayaa ah mid adag oo wajahaya dhibaatooyin badan.
Dhibaatada silsiladda fog ee saadka iyo dhibaatada gaadiidka ayaa noqon kara caqabadda ugu weyn ee loo dhoofiyo dibadda
Iyadoo la hagaajiyay siyaasadaha dhoofinta ee dalka ee wax soo saarka la-dagaallanka cudurka, iyo kor u qaadista qulqulka dadka iyo saadka ee dalal kala duwan, waqtiga gaadiidka reagent-ka ayaa la dheereeyay oo waxaa jira hubanti la'aan, iyo dhibaatooyinka badeecada ee ay sababaan gaadiidka. reagents ayaa noqday caan. Si loo hubiyo in heer kulka uu gaarsiisan yahay heerka tayada wax soo saarkana uu yahay mid u qalma, sanduuqa reagentska ogaanshaha nucleic acid ee ka yar 50g iyo dhowr kiiloo garaam oo baraf qalalan ah ayaa socon kara kaliya labo ama seddex maalmood.Dhibaatada saadka silsiladda fog ee saadka iyo gaadiidka ayaa noqon kara caqabadda ugu weyn ee loo dhoofiyo dibedda.
Shuruudaha heerkulka hooseeya waxay keenaan kharash aad u sarreeya oo gaadiidka ah. Reagent-yada ogaanshaha aaladda nukliyeerka caadiga ah waxay u baahan yihiin in la keydiyo oo la geeyo silsilad qabow oo ah (-20 ± 5) ° C si loo hubiyo in maaddooyinkooda bayooloji ahaan firfircoonaan noqonin kuwo aan ansax ahayn. Marka laga hadlayo ku dhaqanka dhaqanka warshadaha, miisaanka dhabta ah ee reagentyada ay soo saartay soo saaraha ayaa ka yar 10% sanduuqa (ama aad uga hooseeya qiimahan), culeyska badankiisuna wuxuu ka yimaadaa baraf qalalan, xirmooyinka barafka, iyo sanduuqyada xumbada, iyo kharashka gaadiidku aad buu u sarreeyaa.
Saadka ayaa la kordhiyay, saameynta silsiladda qabowna waa la dhimay. Waqtiyada gaarka ah, gaadiidka guud ee xirmooyinka reagent ayaa si weyn u kordhiyay waqtiga safarka. Si loo hubiyo tayada reagentyada dareeraha caadiga ah, dhoofiyayaashu waxay inta badan u baahan yihiin inay diyaariyaan isku xirnaanta silsiladda qabow oo dhowr jeer ka badan kuwa caadiga ah ee guryaha laga soo qaado. Haddii heerkulka gaadiidka aan la damaanad qaadi karin, tayada alaabada reagent ee loo soo gudbiyo macmiilka waxay noqon doontaa calaamatu su'aal weyn.
Qaabaynta qalabka oo aan ku filnayn iyo meel lagu kaydiyo oo aan ku filnayn. Xaaladaha caadiga ah awgood, hay'adaha caafimaadku waxay si joogto ah u fuliyaan mashaariic tijaabinta moodeelka ah mana qalabeyn doonaan qaboojiyeyaal badan ama kuma dari doonaan kaydinta qabow badan. Inta lagu jiro faafida, ma jiraan bakhaarro badan oo ururo samafal oo gaari kara -20 ° C konditio
Qeyb buuxa ladilay reagent, reagent reebent nucleic acid dhoofinta si loo ogaado gaadiidka heerkulka caadiga ah
Si looga gudbo cidhiidhiga ah in reagents ogaanshaha cudurka molikaliska ay u baahan yihiin in la keydiyo oo la geeyo -20 ° C, "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR kitka ogaanshaha acid nucleic (lyophilized)" oo ay soo saartay Shanghai Chuangkun Biotech Inc. reagents qalalan oo qaboojiye buuxa leh waxay leeyihiin xasilooni heer kul oo xoog leh si iska caabi heerkulka sare ee 47 ° C ugu yaraan 60 maalmood, waxaana lagu keydin karaa heerkulka qolka laguna geyn karaa heerkulka qolka. Tani waxay si wax ku ool ah u xallineysaa dhibcaha xanuunka ee gaadiidka dareeraha COVID-19 nukleic acid reagent u baahan yahay ilaalinta silsilad qabow oo hore, waxayna yareysaa cadaadiska ka hortagga iyo xakameynta cudurrada.
Faa'iidooyinka ladilay reagent acid nucleic
Shirkadda 'Shanghai Chuangkun Biotech Inc.' oo ah qayb dhammaystiran oo loo yaqaan 'COVID-19'
reagent ogaanshaha nucleic acid wuxuu leeyahay faa'iidooyinka soo socda marka lagu daro
si ay u kooban iyo waxqabad la barbar dhigo reagent dareeraha:
Kaydinta iyo gaadiidka heerkulka qolka:uma baahna in lagu keydiyo heer-kul hoose intaan la furin, taas oo ku habboon hay'adaha caafimaadka heerarkooda oo dhan.
ku dhammaystiray hal tallaabo:Dhammaan qeybaha waa la waraabiyey, looma baahna diyaarinta nidaamka falcelinta PCR, waxaana loo isticmaali karaa dib-u-dhiska ka dib, iyadoo si weyn loo fududeynayo howlaha hawlgalka.
Soo hel 3 bartilmaameed hal mar:Bartilmaameedku wuxuu daboolayaa hiddo-wadaha 'Novel coronavirus ORF1a / b gene' iyo hiddo-wadaha N. Si loo yareeyo diidmada beenta ah, tijaabada IC ee hidda-wadaha tixraaca gudaha ayaa lagu darayaa badeecada, taas oo si wax ku ool ah ula socon karta dhammaan hannaanka tijaabada laga soo qaadanayo sambalka, soo saarista illaa ballaadhinta, lagana fogaado diidmada beenta ah. Kormeerkii seegay.
Waqtigan xaadirka ah, reagent ogaanshaha unugyada buuxa ee loo yaqaan 'COVID-19 Nucleic acid reagent ayaa helay shahaadada EU CE, oo si guul leh u galay "liiska cad" ee Rugta Ganacsiga Shiinaha ee Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Caymiska Caafimaadka September 15, 2020, iyo waxay ka dhigan tahay in xirmada si rasmi ah loo ansixiyay in loo dhoofiyo iibka dibada si looga caawiyo aduunka la dagaalanka COVID-19 faafa.
Shirkadda Shanghai Chuangkun Biotech Inc. waxay ku qoran tahay liiskii ugu dambeeyay "Rugta Caymiska Caafimaadka ee Liiska Waxsoosaarayaasha Qalabka Caafimaadka ee Helaya Shahaadada Heerka Shisheeye ama Diiwaangelinta" oo ay soo saartay Rugta Ganacsiga Shiinaha ee Soo Dhoofinta iyo Dhoofinta Daawooyinka iyo Alaabada Caafimaadka. Waxay heshay aqoonsiyo wax dhoofineed waxayna u dhoofin kartaa si ay ucaawiso cudurka adduunka kahortaga.
Fayrasku ma yaqaan xuduudaha, ka hortagga iyo xakamaynta cudurkan wuxuu u baahan yahay jawaab wadajir ah oo ay ka helaan bulshada caalamka. Codsiga geedi socodka qaboojiyaha-qallajinta oo ka kooban COVID-19 reagent ogaanshaha nucleic acid waxay faa'iido u yeelan doontaa ka hortagga iyo xakameynta adduunka COVID-19 xanuun saf-mar ah. Si loo taageero bulshada caalamka in si wada jir ah looga jawaabo dhibaatada caafimaad ee bulshada guud ee ku hoos jirta cudurka COVID-19, Shanghai Chuangkun Biotech Inc. waxay bixisaa tayo sare leh "Novel coronavirus 2019-nCoV RT-PCR kit ogaanshaha aaladda nucleic acid (lyophilized)" gacan ka geysto dagaalka caalamiga ah ee lagula jiro cudurada faafa ee Shiinaha!
Waqtiga boostada: Oktoobar-28-2020